Hogaanka Bulshada Rayidka ee Galmudug oo la doortay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Hogaanka Bulshada Rayidka ee Galmudug oo la doortay
Hogaanka Bulshada Rayidka ee Galmudug oo la doortay
Wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan Maamulka Galmudug ayaa Magaalada Cadaado uga qeyb galay doorashada hogaanka ururada bulshada rayidka maamulkaasi.
50 ruux oo ka kooban qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka isla markaana matalayey Degmooyinka Galmudug ayaa cod qarsoodiya ku kala doortay ilaa 6 musharax oo usoo tartamay Gudoomiyaha iyo labadiis ku xigeen.
Gabagabadii doorashada Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Galmudug iyo ku xigeenadiisa waxaa ku dhawaaqay najiitada caydiid Maxamed Cali oo ka mida xubnaha doorashadaan qaban qabiyey, Waxana Gudoomiye loo doortay Qadar Maxamed Faarax Halka Ku xigeenka 1-aad loo doortay Sagal Mahdi Jamac Gudoomiye Ku xigeenka 2-aad ay ku guuleysatay Nuuriyo C/risaaq.
markii ugu horeysay ayeey noqoneysaa oo ururada bulshada raydika Galmudug yeeshaan Hogaan ay ku mideysayihiin waxana mas’uuliyiintaan la doortay looga fadhiyaa matalaad dhab ah.
Previous articleAkhriso waxqabadka Xukuumadda ee 100-ka maalmood
Next articleMarxuum Dr Maxamed Jaamac oo lagu aasay Gaalkacyo